लसुनको साथ ताजा कोड - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
लसुनको साथ ताजा कोड
माछा27 मिनेट4 व्यक्ति
मलाई लसुनको साथ ताजा कड मन पर्छ किनभने यो छ एक नुस्खा जुन धेरै रसिलो बाहिर आउँदछ र पुनःप्रिड अजितोको साथ एक आदर्श स्वादको साथ। यो एक क्रीमको साथ सबैभन्दा पहिले एक आदर्श डिश हो, जस्तो कि हल्का हरियो asparagus.
सत्य यो हो कि कड म माछा हो जुन मलाई कुनै पनि तरिकाले मनपर्दछ। या त संग टमाटरभित्र भाडा ब्रान्डेड र, यसलाई कम महत्त्व दिए बिना, धेरै धनीमा सतर्क पोताजे।
मेरो श्रीमान्, जो सुरुमा मासुको जस्तै हुनुहुन्छ, यसलाई पनि धेरै मन पर्यो। त्यसैले म प्रयास गर्न मन पराउँछु नयाँ व्यंजनहरु तपाईं कुन मन पराउनुहुन्छ हेर्न माछा। मैले स्वीकार्नुपर्दछ कि मैले यस वेबसाइटको लागि प्रकाशित गरेदेखि नै ती गरिबले मेरो "गिनी पिग" हो भनेर विरोध नगरी पीडित हुन्छ तर ऊ विलासी व्यवहार गर्छ र राम्रो आलोचक हो।
1 लसुनको साथ ताजा कोड
पेपरिका लसुनको साथ माछाको लागि एक सरल विधि।
टुक्राहरूमा ताजा कोडको 700 ग्राम
Gar लसुनको लौंग, काटियो
मीठ पप्पिका एक चम्मच
हामी पानीलाई गिलास र कार्यक्रममा खसाल्दछौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
यसैबीच, तेलले भेरोमा कन्टेनर ब्रश गर्नुहोस् र काडको टुक्राहरू नुनको साथ राख्नुहोस्। हामी कभर र रिजर्भ गर्दछौं।
समयको अन्तमा, हामी यसको स्थिति र प्रोग्राममा भेरोमा कन्टेनर राख्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
त्यसपछि हामी भेरोमा कन्टेनर हटाउँछौं र यसलाई आरक्षित गर्दछ ताकि कोडले आफ्नो तापक्रम कायम राख्छ।
हामी सिसा धुन्छौं र सुक्छौं। हामीले तेल र कार्यक्रम राख्यौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
हामी लसुन र कार्यक्रम समावेश गर्दछौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
यस बीच, हामी सेवारत डिश प्रिहिट गर्दछौं र यसमा कोड राख्छौं।
हामी ढक्कन खोल्छौं र ब्लेडको वरिपरि पेप्रिका थप्दछौं। हामी प्रोग्राम १० सेकेन्ड, गति 1.
कडमा लसुन लहराउनुहोस् र तुरुन्तै सेवा गर्नुहोस्।
थप जानकारी - हरियो शतावरी को हल्का क्रीम / टमाटरको साथ कोड, / कोडको ब्रान्डेड / सतर्क पोताजे
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, माछा
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » माछा » लसुनको साथ ताजा कोड
जब तपाइँ ताजा कोड भन्ने गर्नुहुन्छ, तपाइँको मतलब ताजा छ वा अलग गरिएको हो?
फिसमोनगरले तपाईंलाई बेच्ने चीजबाट ताजा गर्नुहोस्, वा तपाईं यसलाई फ्रिज खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई स्थिर बनाउन दिनुहोस् र यो धेरै राम्रो छ।
अवश्य पनि यो धेरै रसिलो देखिन्छ र तपाईंले भेरोमालाई केही हावा दिनुपर्नेछ :)
एनिमेट राकेल भेरोमामा पकाइएको खाना खानको लागि उत्तम हो।
x हामीलाई भन्यो
मलाई थाहा छ यदि यो अर्को प्रकारको माछा मार्फत गर्न सकिन्छ भने।
Xus लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले यसलाई हाकका साथ पनि बनाएको छु र यो अति नै स्वादिलो ​​छ।
कड मात्र त्यस्तो माछा हो जुन मलाई मनपर्दैन, तर यो पक्कै पनि अन्य कुनैको साथ स्वादिष्ट हुन्छ!
ह्याक प्रयास गर्नुहोस्, यो पनि धेरै स्वादिष्ट छ।
त्यो fotooooo कस्तो देखिन्छ! हे भगवान!!!!!!!!।
पक्कै पनि यसको राम्रो स्वाद हुनुपर्दछ।
म नुस्खा राख्छु, उम्म्म्म कस्तो स्वादिष्ट हुन्छ, मलाई कड मनपर्छ।
एक सानो चुम्बन !!
मलाई कड पनि मन पर्छ, जे भए पनि। मलाई लाग्छ कि यस सप्ताहन्तमा म यो एक भट्टीमा गर्ने छु।
म तपाईंको लागि नुस्खाको प्रतिलिपि गर्दछु, मलाई कुनै पनि रूपमा कोड मनपर्छ र यो राम्रो देखिन्छ।
यो गर्नका लागि यो एक सरल तरीका हो तर केटलान पालकसँगै यो विलासी छ।
त्यो धनी देखिन्छ, स्थिर छ कि यो खस्छ
यो स्वादिष्ट र सलाद संग लक्जरी हो।
स्वादिष्ट! यो अर्को केही दिनको लागि पनि राम्रो छ। तपाईंसँग स्ट्युको लागि कुनै विधि छ? धन्यबाद, म तपाईको ब्लग लाई वास्तवमै मन पराउँछु।
कान्छी, हामीसँग पोटेज रेसिपी छैन, तर हुनसक्छ म खुशी छु र यस हप्तामा यो बनाइदिन्छु। हेरौं यदि यसले मलाई जीवन दिन्छ भने, मँ प्रयास गर्नेछु।
हामीले भर्खरै एउटा शानदार खाना खायौं र हामी सबैले यो प्रेम गरेका थियौं, मेरा दुई बच्चाहरू9र years वर्ष पुराना बच्चाहरू सहित लसुन र सॉसमा रोटी डुबाएर, हामी धेरै खुसी छौं! सबैभन्दा जेठो उमेरको जन्मदिन जुन मेरो भगवान already वर्ष भइसक्यो मेरो भगवान कसरी समय बित्छ र म जन्मदिनको केक बनाउन चाहन्छु जुन मेरा छोरीहरूले मलाई सिफारिस गर्छन्!
म धेरै खुसी छु कि तपाईले यस प्रकारले बनाएको कड मन पर्यो। सबै भन्दा पहिले, तपाईंको च्याम्पियनलाई बधाई हो र म ch चकलेट्स केक, वा सान मार्कोस केक सिफारिस गर्दछु। ती दुबै लक्जरी हुन्।
यदि म २ व्यक्तिको लागि नुस्खा बनाउन चाहान्छु भने, म के भिन्न छ? रकम, समय ... ?? धेरै अग्रिम धन्यवाद!
आधा मा सामग्री को मात्रा काट्नुहोस्, तर यो समय मा छोड्नुहोस्। हामी दुई वयस्क हौं र हामी धेरै खादछौं र मैले सबै चीज तयार पारेको थियौं, पछि हामीले खाए र हामीले त्यसलाई प्रेम गर्‍यौं।
सत्य यो हो कि यो ठूलो देखिन्छ, एक दिन म कुनै शंका बिना नै गर्नेछु। आज म बियर कुखुरा बनाउँदैछु जस्तो तपाईले आफ्नो पृष्ठमा बुझाउनु भयो र यसले कस्तो गन्ध लिन्छु भनेर थाहा पाउँदैनौं।
नमस्ते, धेरै राम्रो, किनकि हामीले भर्खरै यो नुस्खा खाइसकेका छौं (यद्यपि मैले यसलाई हेकसँग बनाएको छु) यो धेरै धनी छ यद्यपि मेरो स्वादको लागि यो एकदम धेरै मिर्च हो, तर अझै यो धेरै धनी र रसदार छ। चुम्बन
Consolacion लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मैले भर्खरै यो नुस्खा देखें, र म यसलाई खाने बनाउँदैछु, म तपाईंलाई भन्नेछु किनभने यो स्वादिष्ट देखिन्छ, धन्यवाद
नमस्कार, म अहिल्यै यो रेसिपी बनाउँदैछु किनकि मलाई वास्तवमै कड मनपर्दछ, धन्यवाद
मो टेरेसा भन्यो
दुई हप्ता अघि मात्र मैले थिसोमिक्स किनेको थिएँ र आज मैले लसुनको साथ कड बनाएँ र हामीलाई मन पर्यो, यो द्रुत र धेरै धनी विधि हो!
Mª Teresa लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद Mª Teresa!
नमस्कार! मैले रेसिपी परीक्षण गरेको छु र धेरै राम्रो तरीकाले। के म जान्न चाहन्छु कडको दुई पूर्ण कम्मर राख्नु उत्तम तरिका हो ताकि स्टीम उत्तम सम्भावित तरिकामा बाहिर आउँदछ। मेरो Thermomix स्टीम मा पनि शीशा बाहिर आउँछ।